Ama-Akhawunti Ebhange Lamazwe Ase-International Banking
Ulwazi Lwebhange Lomhlaba Wonke
I-Akhawunti yeBhange Langa i-akhawuntini yasebhange kwelinye izwe ngaphandle kwalelo oyisakhamuzi. Ibhange lamanye amazwe, noma i akhawunti yasebhange ye-offshore, kuvame ukubhekiswa kuma-akhawuntari avulwe ezindaweni zokugcina zezimali njengesinye seziqhingi zaseCaribbean, iCyprus, iLuxembourg noma iSwitzerland. Isikhathi offshore odabuka eGreat Britain futhi ekuqaleni abhekisele emabhange ayengekho lapho. Ngokusho kwesichazamazwi sikaMerriam-Webster, ukuhweba ngaphesheya kwezilwandle kusho "ukutholakala noma ukusebenza kwelinye izwe."
Mhlawumbe cishe amaphesenti angu-50 enhlokodolobha yomhlaba wonke ahamba emabhange akude. Lezi zingxenye zebhange zinikeza ubumfihlo obukhulu, umthetho ovikelayo onamandla nokutholakala komhlaba wonke kwama-deposites akho. Abantu bavame ukusebenzisa ibhange lamazwe omhlaba ukuvikela impahla ngempahla, lapho kuhlangene ne-trust yasolwandle noma inkampani.
Ukuvulwa kwe-Akhawunti yebhange lase-Offshore
Ukuvula i-akhawunti yasebhange laphesheya kwehluke kakhulu njengoba bekuvulwa i-akhawunti yakho yasekhaya. Udinga nje ukuhlinzeka eminye imibhalo embalwa. Uhlinzeka ngemininingwane yakho neyomazisi, isethenjwa noma amabili nediphozi lakho lokuvula. Lapho uvula i-akhawunti yasebhange phesheya, ngokuvamile amabhange adinga ikhophi elibhalwe phansi lepasipoti yakho. Ngaphezu kwalokho, uzodinga ubufakazi bendawo yokuhlala, efana nomthethosivivinywa wosizo, phakathi kwezinye izinto ezimbalwa. Izinto okudingeka uzinikeze zi ngokuya ngezidingo zesikhungo kanye nemithetho yasekhaya neyamazwe jikelele.
Ibhange elingaphesheya lingacela imibhalo yesithenjwa ebhange lakho lamanje. Uma usunayo i-akhawunti yasebhange kwelinye ibhange, ibhange lomhlaba wonke likubona ungaphansi kwengozi. Le mfuneko ngokuvamile yaneliswa ngokukhiqiza incwadi eyinkomba evela ebhange olisebenzisayo njengamanje.
Kwezinye izimo, ibhange elingaphesheya lingafuna ukuqinisekisa umthombo wemali ongena kwi-akhawunti. Bangabheka uhlobo lokuthengiselana okulindele ukulusebenzisa. Lokhu ukuvikela kwebhange. Isizathu ukuthi amabhange aphesheya angaphansi kwengcindezi enkulu yokuqinisekisa ukuthi awazibandakanyi nemisebenzi engekho emthethweni. Ngaphandle kwalokho, bazibeka engcupheni yenhlawulo noma ekulahlekelweni kwelayisense yabo yasebhange.
Ubufakazi bemithombo yesiKhwama
Uma uqashiwe, iholo elikhokhelwayo kufanele likhombise ngokwenelisa ukuqinisekiswa kwesikhwama. Imali evela kumpahla ethengiswayo noma okwenziwe kwebhizinisi kungadinga ubufakazi bemvelaphi ngezinkontileka, amadokhumenti wokuvala nokunye okunjalo. Incwadi evela enkampanini yomshuwalense kufanele yanele lapho kufakwa imali yenkontileka yomshuwalense. Uma imali itholwa njengefa, umabi wefa noma umphathi wokuphathwa kwefa angathumela incwadi ebhange. Ibhange elingaphesheya lingabuza ngemali yakho oyitshalile nokuthi imali yakho ibanjelwe kuphi.
Inzuzo yokuba ne-Offshore Company isungule i-akhawunti yakho ukuthi singabethuli abafanelekayo. Ngakho-ke, singazitholela i-akhawunti yakho emikhakheni eminingi ngaphandle kokudinga ukuya phesheya.
Amathiphu e-Offshore Banking & Izinzuzo
Lapho ubheka amazwe omhlaba usebenzisa imihlomulo ehlukahlukene yamandla aphesheya. Kwamanye amazwe amabhange ase-offshore Ubumfihlo bubhekwe njengento ebaluleke kakhulu, ukuhlinzeka ngemininingwane emaqenjini angagunyaziwe kuyicala labasebenzi basebhange. I-akhawunti yasebhange yaphesheya ingaba yithuluzi elikhulu lobumfihlo. Ukuze ukhulise ubumfihlo bakho bezezimali, uvula i-akhawunti yasebhange egameni lenkampani esetshenziswa kude nolwandle.
Izinzuzo zentela ozijabulelayo zincike ezweni lakho. Abantu base-US, ngokwesibonelo, intela emholweni womhlaba wonke. I-UK, Canada ne Australia bakhokhisa izakhamizi zayo noma ngabe ihlala kuphi. Ngakho-ke kubalulekile ukulandela imithetho futhi uthole nezeluleko zentela nezomthetho.
Ngenxa yokuthi izindleko zokusebenza zivame ukwehla, amabhange aphesheya awanikeza amanani aphezulu enzalo kunamabhange asekhaya. Amabhange angaphesheya anganikeza ukuphepha uma uhlala ezweni elinemali engazinzile noma indawo yezepolitiki. Uma ngabe nguwe lo, ukubeka imali yakho phesheya kwezilwandle kungenye yezindlela ezingcono kakhulu zokuvikela utshalomali lwakho. Ukhathazekile ngejaji lendawo elibamba iqhwa ama-akhawunti akho asebhange? Lokho kuvame ukuba nzima ukwenza lapho imali yakho ibanjelwe ebhange lolwandle.
Abantu abaningi banabangane nezihlobo emazweni aphesheya. Ama-akhawunti aphesheya kwezilwandle futhi ayizindawo ezinhle zokubamba imali uma ufuna ukuthumela imali kuwo. Mhlawumbe othandekayo ohlala kwelinye izwe ukushiyele ifa. Uma kunjalo, ukuvula i-akhawunti kulelo lizwe kuyindlela elula yokuthola imali yakho. Ngabe uhamba kakhulu ezindaweni ezithile phesheya kwezilwandle? Ungahle uthande ukugwema ukuphatha amanani amaningi imali ohambweni. Ngakho-ke, ungakhetha i-akhawunti yasebhange langaphandle.
Kungani Uvula I-Akhawunti Ye-Offshore?
Ama-akhawunti asemabhange aphesheya aphethwe yizinkampani ezingasogwini kanye / noma ama-trust anikela kakhulu ekuvikelweni kwempahla yomuntu siqu. Lapho izinkantolo zasendaweni yakho zithi "nikeza imali," ophethe phesheya angala ukuthobela. Kungakho i-akhawunti yasebhange yamazwe omhlaba ethembele ekuvikelweni kwempahla yangaphandle iyinhlanganisela enamandla kakhulu.
Ukubhanga kude nolwandle kuyindlela enhle yokubamba iqhaza emathubeni okutshala imali kwamanye amazwe. Le nhlangano ivula ama-akhawunti asebhange kuzo zonke izindawo zamazwe amakhulu futhi isebenza njenge-an isethulo esifanelekayo emabhange amakhulu eSwitzerland.
Enye yezimpikiswano eziqine kakhulu zokusungula i-akhawunti yasebhange lolwandle ukuhlukaniswa. Iphothifoliyo eyindilinga kahle imvamisa iqukethe amasheya, izibopho, indawo yangempela, izinsimbi eziyigugu nokunye okunjalo. Okusho ukuthi, ukwehlukaniswa kwempahla ngokuya kusho okungaphezu kokumane ubeke imali yakho ezigabeni ezahlukahlukene zempahla. Kusho futhi ukwahlukaniswa kwezwe kanye nokwakheka kwezwe, ongakufeza nge-akhawunti yasebhange engaphesheya. Khumbula ukuthi isikweletu samanje sezwe lase-US siphezulu ngaso sonke isikhathi, sidlula i-$ 22 trillion njengalo mbhalo. Lezo zinombolo zisho ukuthi ne-US isengcupheni. I-UK isikweletu esingu- $ 2.2 trillion ($ 8 trillion) esikweletini. IFrance neJalimane zingaphezulu kwe- $ 4.5 trillion ($ 5 trillion) ezikweletini.
Ngakho-ke, ukuba nemali phesheya kuyindlela yokuzinikeza ukuphepha okuningana kwezezimali. Uma imali yezwe lakini ibanjwa umgodi wezikweletu wonogwaja, awufuni ukuba bahambe nawe. Ngakho-ke, uma unemali ezifundeni eziphephile lapho ukuwa kwezezimali kwenzeka ngaphakathi, uzoba sesimweni esihle kakhulu kunabomakhelwane bakho. Ngemuva kwakho konke lokho, i-US yehliselwe phansi abakwaStandard & Poor ngenxa yesikweletu sayo eseqile. Kukhona kuphela amazwe akalwe nge-16 S&P AAA emhlabeni. I-US akuyona enye yazo.
Ukukhetha imali yakho
Ngokungafani nama-akhawunti amaningi ase-US, ibhange elingaphesheya likuvumela ukuthi ukhethe phakathi kwemali ezahlukahlukene lapho ubambe khona imali. Abatshalizimali abaningi bakhetha ukubamba impahla ngezimali ezahlukahlukene. Ngenxa yalokhu, abathinteki kancane uma amandla okuthenga e-dollar ancipha.
Kodwa-ke, kuyilapho kunezinzuzo eziningi zokukhetha phakathi kwezimali ezehlukene, kukhona nokuphazamiseka. Ungaqeda ukukhokhela izintela zakwamanye amazwe ngezinzuzo ezitholakalayo. Uma izwe enamali oyitshalile ukuthi lizobhekana nokwehlukana kwemali, ukulinganiswa kwemali kungenzeka. Lokho kusho ukubaluleka kwamafa ku-akhawunti yakho yasebhange kungawa. Kukhona njalo amathuba okuguqulwa kobuso ezweni, kanye nokuhlelwa kabusha kwamabhange.
Lokhu kungenzeka kakhulu emazweni amaningi. Khumbula ukuthi amazwe amaningi awunawo amandla we-cybersecurity we-US. Ngakho-ke, izingqinamba zokuthola ukwebiwa kobumazisi noma ubugebengu obufana nobabo bobugebengu be-cyber bukhula kancane. Ngaphezu kwalokho, amazwe amaningi ayinayo imithetho yokuvikela yabathengi efanayo ne-US. Phenya imithetho yokuvikela abathengi besizwe ngaphambi kokuvula i-akhawunti yasebhange langaphandle. Okungcono futhi, xhumana nenhlangano enolwazi ekuvuleni ama-akhawunti aphesheya kwezilwandle. Inhlangano yethu inkulu kakhulu emhlabeni wonke ekusizeni abantu abadinga ama-akhawunti asebhange aphesheya.
Ukushintshela enye imali kwenye kungenza kubandakanya imali yokushintshana. Izimali zokushintshana zihlala ziyisici esijwayelekile sokuguqulwa kwemali. Yingakho iningi labantu elisebenzisa ukuhweba ngezinsuku ze-forex njengecebo lokutshala imali livame ukulahlekelwa.
Thola Usizo Lomsebenzi
Ngakho-ke, izizathu ezingenhla zisekela ngokuqinile ukuthi kungani kubaluleke kakhulu ukuba nosizo lochwepheshe lapho uvula i-akhawunti yasebhange engaphesheya. Ochwepheshe bethu bayazi ukuthi imaphi amabhange aphathe kahle amakhasimende ethu. Siyazi ukuthi yiliphi ibhange elizovula ama-akhawunti abantu abahlala ezweni lakho. Ngaphezu kwalokho, ukuphepha kwasebhange kuyisifiso esinamandla samakhasimende ethu. Ngakho-ke, sicwaninga njalo solvency yamabhange ngaphambi kokuba sincome. Ngaphandle kwalokhu, akuwona wonke amabhange agcina njengama-stallward wezezimali. Kanjalo, kunezinombolo ezingenhla zokuxoxa ngezidingo zakho nochwepheshe. Ngenye indlela, ungagcwalisa ifomu lokubonisana lamahhala kuleli khasi.
Ungakhokhela i-akhawunti yakho yasebhange engaphesheya ngokuthumela ngokudluliselwa kwe-akhawunti kusuka kwi-akhawunti yakho yasebhange lasekhaya uye kwelinye elise phesheya. Kunokucatshangelwa okuncane kokudluliselwa lapho kwenziwa ebhange lolwandle, futhi okuphathelene nezimali ezikhokhwayo. Ngokungafani nokudluliswa kwentambo okwenziwe phakathi kwamabhange asekhaya, ukudluliselwa kocingo lwamanye amazwe kwesinye isikhathi kubandakanya imali ekhokhiselwa ikhasimende ukuthi imali iyathunyelwa noma iyatholwa. Ayikho imali ejwayelekile, ngakho-ke kungenzeka ukuthi amaklayenti wamabhange aphesheya angabheka izikhungo ezinikeza amadili amahle kakhulu. Ngokuphawuleka, amabhange aphesheya awasebenzisi amasheke (amasheke). Ngakho-ke, izinketho ezinhle kakhulu kunokudluliswa kwezingcingo.
Ukuhoxisa imali kuma-akhawunti akho aphesheya kwezilwandle ngokuvamile kulula. Lokhu kungenxa yokuthi ibhange lakho kufanele likunikeze i-ATM noma ikhadi lokudonswa kwemali. Ngaleyo ndlela, imali yakho itholakala kalula emhlabeni wonke. Manje, lokhu kuhanjiswa kubuye kukhawulwe ngemali efanelekile. Kuyaqabukela, ibhange elingaphesheya lizohlinzeka ngamasheke, kepha akuyona indlela efanelekile yokuhoxisa imali yamakhasimende amaningi. Lapho ibhange elingaphesheya libheka iklayenti, ubumfihlo buyancipha. Kunzima futhi ukheshi isheke elidwezwe ebhange langaphandle. Ngaphezu kwalokho, ukonga isheke elinjalo kungadinga isikhathi eside sokulinda.
Enye indlela enhle isebenzisa ama-akhawunti amabili, ebhange lasekhaya nelaphesheya kwezilwandle, ngokulandelana. Ngokudlulisela ngocingo, ungathumela imali kwi-akhawunti yakho engaphesheya uye ebhange lakho lasekhaya. Ngakho-ke ukuthola imali yakho akuyona inkinga. Usakujabulela ubumfihlo okunikezwa yi-akhawunti yakho yasebhange engaphesheya ngenkathi usebenzisa inzuzo yebhange lasekhaya.
Lapho wenza ucwaningo lwakho kuma-akhawunti asebhange phesheya, cabanga ngentela yendawo. Amabhange amaningi aphesheya kwezilwandle esiwasebenzisayo akaphoqi intela yendawo kuma-akhawunti aphesheya, kanti amanye enza. Isibonelo, uma ubamba i-akhawunti eSwitzerland ngamadola aseMelika akukho ntela eSwitzerland. Uma umuntu ephethe i-akhawunti eSwitzerland, umnikazi we-akhawunti ukhokha izintela zaseSwitzerland kulezo zinzuzo.
Ngakho-ke, lokho kungasho ukuthi ugcina ungakhokhi intela hhayi ezweni lakho kuphela, kodwa ezweni olibhange kulo. Imvamisa, uthola ukuthi kudonswa intela yakwamanye amazwe ekhokhweni yakho yentela yasekhaya, ngakho-ke imiphumela ngokuvamile ayithathi hlangothi.
I-akhawunti yasebhange yamanye amazwe yisizwe esingaphandle kwemingcele yezwe lakho. Kuhlanganiswe nethemba lokuvikela impahla ye-offshore kungenye yezindlela ezinhle kakhulu zokuvikela okungokwakho. Amabhange angafika phesheya avikela amalayisense abo ngokulandela imithetho edingekayo esemthethweni yokwazi-kwamakhasimende akho. Lokhu kusho ukuthi kufanele unikeze imibhalo esemthethweni yezicelo zasebhange.
Sebenzisa imali ese-akhawuntini yakho phesheya kulula njengokuswayipha ikhadi lokudonswa kwemali. Ukuthumela nokwamukela imali kwi-akhawunti yakho yasebhange laphesheya kulula njengokudlulisa ngocingo.
Ngabe ufuna ukuvula i-akhawunti yasebhange engaphesheya? Uma kunjalo, sicela usebenzise izinombolo zocingo ezingenhla. Ungagcwalisa ifomu kuleli khasi ukuthola eminye imininingwane, amahora we-24 ngosuku.